ဖွဦးမှ .. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ဖွဦးမှ ..
Posted by ကထူးဆန်း on Feb 28, 2012 in Critic | 28 comments
ိအဟိ.. စံနစ်ကြောင့် ဗီဇကြောင့် လူမျိုးကြောင့် ရယ်လို့ ဒီဗိတ်လုပ်နေကြတာ ဖွထားတဲ့ အမှိုက်များမှ ထပ်ဆင့် ပြီး ဖွလိုက်ပါဦးမယ်။
ရွှေတိဂုံဘုရားသွားတော့ မြောက်ဘက် စောင်းတန်းကနေ တက်မယ့် အလုပ် တွေ့ လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက ကိုရှုံးတို့ သူကြီးတို့ကို အားဖြည့် စရာတွေ့သွားလို့ပါ … :grin:
ကျုပ် အလုပ် ဘာလည်းဆိုတာ သိကြရဲ့လားဗျို့ .. ကျုပ် ရင်ခွင်ထဲတော့ မထည့်ကြဘူးဗျာ..
အမှိုက်ပုံးက အမှိုက်ပုံး အမှိုက်က အမှိုက် သပ်သပ် ဒီလိုနေတာခင်ဗျ
စိုက်ပြီးတော့ မရိတ်ဖူးဗျ ။ အလကားတော့ တိုက်ပါရဲ့ အမှိုက်ပုံးတော့ ထားပေးဘူး ရယ်..
အလှုလုပ်တဲ့ Asia Aloe Vera ကလည်း ကျုပ် ဆွေမျိုး အမှိုက်ပုံး ထားပေးဘူးရယ် ။ သောက်တဲ့သူများကလည်း ဂွပ်ဆိုသောက်ပြီး ဖတ်ဆို ဘေးပြစ်လိုက်တာ ဘဲဗျ။ ဘုရားပေါ်တက်မဲ့ စောင်တန်းအ၀င်ဝကြီးမှာ ခင်ဗျ။ စိတ်ပုပ်တဲ့ ကထူးဆန်းကလည်း သူများတွေလို ဘုရားအလှ မီးတန်ဆာဆင်ထားတာတို့ မြန်မာ့ရိုးရာ ဈေးပွဲတန်းတို့ မရိုက်ဘဲ ကျုပ် ဟာ ကျုပ် အေးအေးနေတာ မနေရအောင် ဒါ့ပုံကြီး ရိုက်သွားတယ် ။ ကျုပ် အလုပ် ကျုပ် ရင်ခွင်ထဲ မြန်မာပြည်က လူတွေ မထည့်ကြတာ ကျုပ် အပြစ် ကျုပ် စံနစ်တွေကြောင့်လားဗျာ ။
ဖွတယ်လို့ ပြောရင် တန်ဘိုးလျော့သွားမှာပေါ့ကိုထူးဆန်းရယ်။
ဒီလို စည်းကမ်းမဲ့ တာလေးတွေကို
ကိုထူးဆန်းရေ … အလွန်ကောင်းတဲ့သဘာဝကျကျရိုက်ချက်တွေပါပဲ ..
မနက်ကတောင် ကိုလုလင် ပို့စ်ထဲဝင်ပြီး အမှိုက်ကောက်တဲ့အကြောင်းကော့မန့်ပေးဖြစ်သေးတယ် …
အစပစ်တဲ့လူက ပစ်လို့ နောက်လူတွေ လိုက်ပစ်တာပါ … ။
ကားပေါ်မှာ ထောက်လှမ်းဂေရးလုပ်ခံရလို့ အော်တာ ရှက်စရာမဟုတ်ရှက်ပြီး …. ဒီလို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ကိုယ့်အမှိုက်ကိုယ် လက်လွယ်စပယ်ရှင်းတာမျိုးကို ရှက်ရကောင်းမှန်းမသိ …ရှက်စရာလို့မမြင်နိုင်အောင် ဘယ်လို အမိုက်မှောင်တွေများ ဖုံးလွမ်းနေပါပြီလဲ … ။
မိမိကိုယ်တိုင်မှ စပြီး တစ်ဦးတစ်ယောက်စီ လိုက်နာနိုင်မှသာ .. နောက်ပိုင်း ပြောင်းလဲချင်ပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ် .. ဒါကြောင့် မီဒီယာတွေအနေနဲ့လည်း … ဒီလို စည်းကမ်းမဲ့တာတာ ရှက်စရာတစ်ခုအနေနဲ့ ပြည်သူတွေ ရင်ထဲ ခေါင်းထဲ ရိုက်သွင်းပေးဖို့ လိုတယ်လို့မြင်မိတယိ .. အစုိးရအနေနဲ့လည်း … အမှိုက်ပုံးတွေကို … ထားရှိပေးရုံမှ မကပဲ .. အချိန်မှန် သိမ်းဆည်းတာတွေပါ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ် .. ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ကျေပါမှ …အမှိုက်မဲ့တဲ့ … သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနေရာတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ ..တစ်ယောက်အားနဲ့တော့မရဘူး .. လူတိုင်းလူတိုင်း … ကိုယ့်အမှိုက်ကိုယ်ဂရုစိုက်မှပဲ ရမယ် … ။
မီဒီယာတွေကလည်း ..မဟုတ်က ဟုတ်ကတွေ ဇာတ်လမ်းတော့ ဆင်ရိုက်တတ်တယ် .. ဒီလို မီးမောင်းထိုးရမယ့် ကိစ္စမျိုးတော့ … မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတယ် … ဒင်းတို့ အိမ်ရှေ့ အမှိုက်ပုံအဖြစ်သေးသရွှေ့တော့ ဒီကိစ္စခေါင်းထဲထည့်တွေးလိမ့်မယ်တောင် မထင်ဘူး …
ကိုထူးဆန်းရေ .. ဘရာကြော်ပါဗျို့ .. ဒီလို ပို့စ်မျိုးကို … အားပေးထောက်ခံလိုက်ပါတယ် … ။
ကျုပ် တို့ မြန်မာပြည်က လူတော်တော် များများ အဲဒီ အမှိုက် စွန့် တဲ့ နေရာ မှာ တော်တော် လေး စနစ်တကျ မရှိ အားနဲချက် ကို တွေ့ တွေ့ နေရတယ်။
ကွမ်းစား တဲ့ ၉၀ ရာနှုံး လူ တွေမှာလဲ ကွမ်းတံတွေး ကို ကြုံ သလို စွန့် ပစ် ကြတာ လဲ ရှိတယ်။
အဲဒါတွေ ကို ပြင်လာ ချင်အောင် ကျုပ်တို့ ခင်ဗျားတို့ အားလုံး ရဲ့ တာဝန် လို့ သဘောထားပြီး ကိုယ် ကိုယ် တိုင်ပါ သတိနဲ့ ဆင်ခြင်လို့ ပညာပေး စည်း ရုံး ကြရအောင်။
ခင်ဗျားပို့စ်လေး ဖတ်ပြီး ကိုသစ် ရေးခဲ့တာလေး သွားသတိရမိတယ်ဗျာ။
ဒီလို ကိစ္စလေးတွေက ကျွန်တော်တို့ တစ်ဦးခြင်းက စရမယ့် ကိစ္စမျိုးလေးတွေပါ။
ကျွန်တော်တို့ ရွာသူရွာသားတွေက စပြီး
ဒီလို စည်းကမ်း လေးတွေကို လိုက်နာကြရအောင်ပါ။
သူများတွေ လိုက်နာတာ မလိုက်နာတာ ခဏမေ့ထားပြီး
ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့က စလိုက်ကြရအောင်ဗျာ။
ကိုထူးဆန်း ရဲ့ တန်ဖိုးရှိပို့စ်လေးကို ဖတ်အပြီး ကိုဘလက်ပြောတာကိုထောက်ခံတယ်ဗျို့..
လူတဦးချင်းစီတိုင်းက ကြုံသလို စည်းကမ်းမဲ့ အမှိုက်ပစ်တာ ရှက်စရာလို့ မြင်လာအောင်
ရှေ့ကနေ နမူနာ ပြမဲ့လူတွေ လိုနေတာသေချာတယ်ဗျ.. ပြောနေတာလဲ ကြာခဲ့ပေါ့..
ဆိုတော့ စစ်တွေကမ်းခြေမှာ လုပ်အားပေးတွေစုပြီး အမှိုက်ကောက်သလို ၀ိုင်းလုပ်ကြရင်ရော..
စည်ပင်ကတော့ ကောက်နေပေမဲ့ ဒီလိုမျိုး လူငယ်လူရွယ်တွေ..
ငွေမကုန်တဲ့ အကျိုးပြုလုပ်ရပ် တခုပေါ့ဗျာ..
*ဘုရားပေါ်မှာ တံမြက်စည်းလှဲသလောက် ကုသိုလ်ရမရတော့ မသိနိုင်ဘူး.
စည်းကမ်းလေးတော့ ရှိကြပါလို့ ပြောင်းလိုက်ပေါ့…။
မြန်မာတွေ ပြုပြင်သင့်တဲ့ စရိုက်လေးတွေကို ထောက်ပြထားတဲ့ပုံလေးတွေလို့ မြင်ပါတယ်ဗျာ…
ကျုပ်တို့လူမျိုးကလည်း ပြောမှသိ၊ ထိမှနာတတ်ကြတာကလားဗျ
အားပေးတယ် ကိုထူးဆန်းရေ့ …..
သဂျီးကတော် ၀တ္ထုစာသား နဲ့ ကိုသစ်စကားငှားသုံးမယ်…
သည်ကိစ္စမှာ အီနားရှား မနေသင့်တော့ပါဘူး..
အ၀ဲယားနက်စ် လေး … လုပ်ကြရအောင်ပါ
ဒါက ဖွတယ်မခေါ်ပါဘူး။ လူတွေ ကိုယ့်အသိနဲ့ကိုယ် ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ယူတတ်ဖို့ မီးမောင်းထိုးတဲ့ သတိပေးတဲ့ သတင်းဓာတ်ပုံပါ။ အရှိကို အရှိအတိုင်း ပြောပြနေတဲ့သတင်းဓာတ်ပုံပါ။
ကျမလည်း ဒီနေ့ကစလို့ စည်းကမ်းရှိဖို့ သတိလေးကပ်ပြီး ဆင်ခြင်ပါ့မယ် ပြင်ပါ့မယ်။
သူ့ဖာသာ အမှိုက်ပုံးမရှိတာက အကြောင်းတစ်ခုဘဲ
အမှိုက်တွေကို ဘာလို့ခေါ်သဒုံးဗျ ပလက်ဖောင်းလားဘာလား ခေါ်တတ်ဘူး
ဇာတ်ပွဲဖြစ်တဲ့ လယ်ကွင်းထည်းမှာလို ပြန့်ကျဲအောင်မပြစ်ထားဘူး
ကျုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ စည်းကမ်းလိုက်နာကြဘို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပုံရတယ်ဗျ
မှန်ကန်တဲ့ ဖွဲစည်းပုံ လုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိဘို့လိုအပ်လာပြီဗျို့
ပြောင်မြောက်သော အပေါင်းလက္ခဏာဆောင် အတွေးပါပေ။
ဟယ် စိတ်ညစ်ဖို့ ကောင်းလိုက်တာ။
ဒီကွန်မန့်ကို နိုင်ငံခြားသား မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ကွမ်းရောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပုံနဲ့တွဲတင်ထားတယ်
These neatly designed leaves are called betel. It’s ground up intoasort of red smelly paste thatalot of Burmese men (and sometimes women) chew and spit out. It disperses all throughout their mouth and teeth and when they open their mouth it looks really disgusting – like someone with terrible gum damage or like they were punched in the mouth. It’s likeatobacco in that you have to spit it out. The red marks all over the streets throughout Myanmar is often mistaken by tourists for blood. It’s not – it’s betel nut.
ကျွန်မတူလေးဟိုနေ့က ကားစီးလာရင်းနဲ့ခြောက်လမ်းသွားလမ်းမကြီးပေါ်မှာအမှိုက်ကိုပစ်ချခဲ့တယ်။ ကျွန်မကလဲ ဟဲ့မပစ်ရဘူးလေမသိဘူးလားလို့မေးတော့ မသိဘူးတဲ့။ ကျောင်းမှာရောမသင် ဘူးလားလို့ ဆိုတော့စာတွေများလွန်းလို့ သင်ချိန်တောင်မရပါဘူးတဲ့။ တူလေးက ၄ တန်းပါ။ မငယ်တော့ဘူး လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ နင်တို့ပဲပြည်သူ့နီတိတွေသင်တယ်ဆိုဆိုတော့မသင်တော့ဘူးတဲ့။ အဲတော့လဲပေါ့လေ ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ အုတ်မြစ်ခိုင်မှအဆောက်အဦးကောင်းမှာဆိုသလိုပဲ ဒီလိုကလေးတွေကိုစသင်မှ လူကြီးတွေပါသိနိုင်တော့မှာပေါ့။ ဒီ ၄ တန်းကျောင်းသားကလမ်းပေါ်မှာအမှိုက်မပစ်ရဘူးဆိုတာမသိ ဘူးဆို တော့ကျွန်မတော်တော်အံ့သြသွားတာပါ။ လူကြီးတွေမသိဘူးဆိုတာလဲမဆန်းတော့ဘူးထင်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတဲကသိမှမသိလာတာကိုး။ လူရွှင်တော်တွေပျက်သလို တိုင်းပြည်စည်းကမ်းရှိစေချင်ရင် ၅ နှစ်နဲ့ အထက်အကုန်သတ်မှရမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။
အော် ..ရယ် ဘယ်လိုပြောရမလဲ ဆိုတော့ ကျောင်းချည်းပဲတော့ ပုံချလို့ မရဘူးထင်တယ် ။
လက်ဦးဆရာ မိနှင့်ဖ ကိုယ်တိုင်က ရှေ့ကနေ စံပြအနေနဲ့ လုပ်ပြ သင်ပြရင်တော့ ကလေးက အသိရသွားမှာပါ။ မိဘရဲ့ သွန်သင်မှုကလည်း အရေးပါပါတယ်။
ကျောင်းတွေမှာ အသင်းတွေ ဖွဲ့ပြီး နေ့တိုင်း အပတ်တိုင်း အခန်းခုံစီ သန့်ရှင်းရေး လုပ်တာ၊ သောက်ရေဖြည့်တာ၊ အမှိုက်သွန်တာတွေ ကျောင်းတိုင်း လုပ်ရပါတယ်။ ကျောင်းနောက်ကျရင် ကျောင်းဝင်းထဲတောင် အမှိုက်လိုက်ကောက်ရတဲ့ ဒဏ်မျိုးပေးတာပါ။
ကျောင်းပြင်ပမှာ ကလေးမလိုက်နာတာကတော့ ဒေါ်ဒေါ်ပဒုမ္မာရဲ့ စကားကို ငှားပြောရရင် ဗီဇလား စနစ်လား အသိစိတ်ဓာတ်လား ဆိုတာကိုပဲ ပြန်မေးရတော့မယ် ထင်ပါရဲ့။
ဒါပေမဲ့ အမှိုက်ဆိုတာ စနစ်တကျ စည်းကမ်းတကျ စွန့်ပစ်ရမယ် ဆိုတဲ့ အသိကို ခုမျိုးဆက်တွေကို အသေအချာလေး ပုံသွင်းပေးခဲ့ အသိစိတ်သွင်းပေးခဲ့မယ် ဆိုရင် နောက်မျိုးဆက်ကျရင် ခေတ်မှီလှပ သန့်ရှင်းသော သပ်ရပ်သော တိုင်းပြည်ဆိုတာ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ခုလို ချိန်ခါမှာ ကိုယ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ချက်ကောင်းထိပါစေတော့ရယ်လို လက်ညောင်းခံ ပြီး ခဲနဲ့ များများ ၀ိုင်းထုပေးကြရမှာပါ။
အမှိုက်ပုံးထက် ပလက်ဖောင်း ဆိုတာကြီးကပိုကျယ်လို့နေမှာပါ…နော့
(ဂေါပက လူကြီးများ ခင်ဗျား ပလက်ဖောင်းထက်ကျယ်တဲ့ အမှိုက်ပုံးများပြုလုပ်ပေးကြပါရန်)
အင်း .. အမှိုက်တွေက မြင်မကောင်းလောက်အောင် ပါပဲလား … ။
အမှိုက်ပုံ လုံးလုံးမရှိတဲ့ နေရာဆိုလည်း ထားတော့ … ။
ပြီးတော့လည်း ဘုရားနားမှာ … ။
နိုင်ငံကြီးရဲ့ စစ်စတန် ကတော့ ပြောင်းလဲနေပါပြီ .. ။
ကျုပ်တို့ လူထုတွေရဲ့ အပြုအမှုတွေကိုလည်း ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ သင့်ပါပြီ ။
ရွာမှ ပရဟိတ စိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်လေးများ
စုစည်း၍ အမှိုက်လိုက်ကောက်ရန် တိုက်တွန်းပါသည်
(ဂေဇက်ဝဘ်ဆိုဒ် အင်္ကျီလေးတွေနဲ့ပေါ့ .. ဒါကလည်း တစ်ဖက်က ကိုဂီရဲ့ မားကတ်တင်းလည်းပါပေါ့)
အော် …ဒို့မြန်မာတွေ မမြင်နိုင်တဲ့ အရာကိုကျတော့… မျက်စိမိတ်ပြီး ထည့်ဝင်လှူဒါန်းဖို့ ၀န်မလေးဘူး.. မြင်ရတဲ့ အမိုက်ပုံးကိုကျတော့ အမိုက်ပစ်ထည့်ဖို့ ၀န်လေးနေကြပါလား….ပိုက်ဆံကုန်တဲ့ဒါနကိုထည့်ဝင်လှူဒါန်းဖို့တော့ သတိရကြပြီး..ငွေမကုန်တဲ့ ဝေယျာဝတ်စဒါန ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ မေ့နေကြတယ်…
စားပြီးနားမလည် ဝါးပြီးထွေးထုတ် ကြသူများပေါ့လေ ။
ဘိုထူး ရဲ့ပုံနှင့်တစ်ကွ ဖော်ပြသော စည်းကမ်းရှိပုံများ ။
တချိန်ကထောက်ကြန်.စစ်သင်းချိုင်းရှေ.တွင်မည်သူမျှ အမှိုက်မပြစ်ရဲပါ ။
ကြမ်းတန်းသောအရေးယူမှုဟုဆိုသော်လည်း ၊ အလွန်စည်းကမ်း ရှိခဲ.ပါသည် ။
ရွှေတီဂုံအနီး ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း ဗဟန်း၃လမ်းမှတ်တိုင်အနီးမှာ စနေ တနင်္ဂနွေနေ့ညနေတွေမှာ မွန်မွန်ရည်ရည် လူရွယ်တစ်ဦး ပလပ်စတစ်နဲ့ အမှိုက်တွေကို အမြဲ တစ်ကိုယ်တော်လိုက်ကောက်ပေးတာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ သူအခြား ဘယ်နေ့တွေ ဘယ်အထိလိုက်ကောက်ပေးသလဲတော့ အဆုံးထိ မမြင်ဖူးပါ။
လက်မ အမြင့်ကြီး ထောင်သွားပါတယ်။
အစ်မ ပဒုမ္မာ ပြောတဲ့ သူဟာ ကထူးဆန်း များ ဖြစ်နေရော့သလား။
ဘဘု ပြောသလို အမှိုက်တွေ ကို ဘေးကပ် ပေးသွားတဲ့ စိတ်ရှိနေကြတာမို့ အသိလေးတစ်ချက် ဝင်တာနဲ့ အားလုံးကောင်းသွားဖို့ မျှော်လင့်ကြတာပေါ့။ ;-)
ကျွန်မတို့ လူမျိုးတွေ တကယ်က မညံ့ကြပါဘူး။
ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ.. ဖရီးဝေးအမှိုက်ပစ်ရင်.. ဒေါ်လာ၁ထောင်လို့.. ဆိုင်းဘုတ်တွေ.. တွေ့ရတတ်တယ်..။
အမှိုက်ကိစ္စအတွက်.. ယူအက်စ်အစိုးရ၀က်ဘ်ဆိုက်က.. ရီဆတ်ခ်ျလေးပါ..။
ကောင့်တာလေးတွေကိုင်ပြီး. အမှိုက်ချသူတွေကို.. အသက်တန်း..ကျားမထိုင်မှတ်..။
ပြီးတော့.. စိတ်ကူးတည့်ရာသူ.. အင်တာဗျုးလေးလုပ်ပေး…။
အဲဒီလို.. တီဗီသတင်းဌာနက.. တလလောက်လုပ်ရင်.. တော်တော်နည်းသွားမယ်ထင်တယ်..။
Why people litter:
Helpasmoker who litters by sending him or her an anonymous email and free personal disposable ashtray from http://www.cigarettelitter.org
A poll conducted in 1998 of male and female Texans > 16 years old revealed the following predictors of littering in order of importance:
Florida Litter study 1993-97 includedareview of other state efforts: “During the past 10 years, several states have conducted successful litter reduction campaigns. Programs in Texas, Oklahoma and Pennsylvania, for example, have provided evidence that grassroots participation combined withastatewide media campaign can be effective reducing litter.”
Texas – “Don’t Mess with Texas” – began in 1986, initially spent $2 million/year. Texas had the first Adopt-a-Highway program. A new campaign began in ’98 and had these groups sign on: HEB grocery (printed slogan on one billion plastic shopping bags), Coca Cola bottling (tagging radio ads), Dairy Queen (printing the logo on its bags) and McCoy Building Supplies (putting bumper stickers on its fleet and the logo on its bags).
Pennsylvania – Litterbug isaregistered trademark of the Pennsylvania Resources Council. It first let the National Council of State Garden Clubs use it in the mid ’50s for “Don’t beaLitterbug” campaign. Then the PRC let Keep America Beautiful use if for more than 10 years. A newer litterbug for the PRC was created in ’97. Pennsylvania Dept. of Environmental Protection launchedanew litterbug campaign in response to concerns about litter impacts on tourism, real estate values, economic development and health and safety. Farmers reporting losses of millions of dollars due to glass also heightened concerns about roadside littering and metal litter that damaged equipment and injured animals.
Oklahoma – Initiateda2-pronged litter reduction campaign in ’87. Adopt-a-Highway Program was begun to get citizens involved in cleanups and at same timeamedia campaign began. Result was litter down 23% from ’88-’89.
အောင်မလေး ကယ်ဂျပါအုံး..သဂျီးကျနော့်ကို ထောက်နေပါဒယ်………………ဒါးနဲ့
ဘုရားပေါ်မှာ သူ့အချိန်အလိုက် ဆက်ရှင်ခွဲပြီး သန့်ရှင်းရေးဒါနယူတဲ့ အစီအစဉ်လုပ်ပေးနိုင်ရင် ကောင်းမယ်ဗျို့.. အခုခေတ်မှာ အုပ်စုအလိုက် ကုသိုလ်ယူချင်တဲ့ လူငယ်လူရွယ်အဖွဲ့တွေ များပါဘိနဲ့..။ ပရိတ်၊ ဝတ်ရွတ်တာလည်း ရွတ်ပေါ့.. တဖွဲ့ရွတ်နေချိန်မှာ ကျန်တဖွဲ့က ဘုရားပရဝုတ်တလျောက် သန့်ရှင်းရေးကုသိုလ်ယူ၊ ဘုရားဖူးမျာကို ပညာပေး စာရွက်စာတမ်းများဝေငှ…ပုံမှန်နေ့စဉ် အလှည့်ကျ လုပ်သွားရင် ရေရှည်မှာ အလေ့အကျင့် ဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ်။ ခက်တာ ဘုရားဂေါပကများက လုပ်ချင်စိတ် တာဝန်ခံလိုစိတ်ရှိအုံးမှဗျ.. ဒီခေတ်မှာ မလုပ်မရှုပ်မပြုတ်၊ တခုခုဖြစ်လာရင် တာဝန်ခံရမှာဆိုတော့ လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူဆိုတဲ့ ငမိုက်သားများ နားလည်ပေးမှရမယ်..။
အခုတလော သတိထားမိတာ အမှိုက် ကိစ္စ ရန်ကုန် မြို့နေ လူတန်းစားတွေ တော်တော် အသံထွက်လာတာ သတိထားမိတယ်။
တနေ့ကလည်း ရေဒီယိုမှာရန်ကုန်မြို့တော် သန့်ရှင်းရေး အတွက် အမှိုက်လိုက်ကောက်တဲ့ လူမှု အသင်းတွေ ရှိသင့်တယ် အမှိုက်မပစ်ဖို့ လူထု ကလည်း လှုပ်ရှားမှု လုပ်သင့်တယ် စသဖြင့် ပြောသွားတယ်။
ရွှေတိဂုံ ပွဲဈေးတန်း ကို ရောက်ခဲ့တုန်းကလည်း အဲဒီလို မြင်ကွင်းတွေ တွေ့မိတယ်။ လူများရင် အမှိုက်ကတော့ ပွ တာပဲ.. လူနဲ့ အတူ အမှိုက်တွေ ပါလာတာ ပြသနာ..
လူများများ လာတဲ့နေရာမှာ ရှက်တတ်ရင် အသိတရားရှိရင် အမှိုက်ကို ပုံးထဲ ရောက်အောင် ပစ် ပါ ဆိုတဲ့ စာတမ်းတွေ မြင်သာတဲ့ နေရာမှာ လိုက်ချိတ်ပြီး စိတ်ဓါတ် စစ်ဆင်ရေး လုပ်ကြည့်ရင် ကောင်းမယ် ထင်တယ်။